2010 ခရစ္စမတ် (1)
AirBiru Rainbow Education Center (1)
AMCC အစပထမ (1)
Mobile Phone နှင့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် (1)
Rev.Aung Aung (1)
Website များစုစည်းရာ (1)
ကွန်ပျူတာမှာError တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင် ဖို့အတွက် (1)
ကွန်ပြူတာသင်တန်း၊ ပညာရေး (1)
ကျင့်ဆောင် လိုက်လျောက်၇န် - ပညတ်တော်မြတ် ၆၁၃ ပါး (1)
ခရစ်ယာန်တိုင်း သိရှိရန်လိုအပ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်း (1)
ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ(အကျဉ်းချုပ်) (1)
စတုတ္ထရာစု လွဲမှားသောအယူဝါဒ သွန်သင်ချက်များ (1)
ဆယ်ဘို့တဘို့ (သို့) ကောင်းကြီးသော့ (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 1 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 10 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 11 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 12 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 13 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 14 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 15 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 16 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 17 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 18 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 19 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album2(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 20 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 21 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 22 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 23 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 24 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album3(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album4(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album5(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album6(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album7(1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album 8 (1)
ဓမ္မသီချင်းMp3Album9(1)
ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံလေးစားခြင်းမရှိသူများအကြောင်း - လောမဲ (1)
ရင်ခုန်စရာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်။ ကြော်ငြာ (1)
ရင်သွေးအတွက် မိမိကိုယ်ကို ဓါးဖြင့် (မိခင်မေတ္တာ) (1)
လက်မရှိပေမယ့် လေယဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတဲ့မိန်းကလေး (1)
သင် Anti-Christ ကိုမသိဘဲနဲ့ ကိုးကွယ်မိနေသလား? (1)
အသင်းတော်အဖွင့်နေ့ ကိုရန်သို (1)
Mobile Phone နှင့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်
9:12:00 am Mobile Phone နှင့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် No comments
Mobile Phone နှင့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် (မျှဝေပေးကြပါ )
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေထွက်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည် Radiation တွေက လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်စေမှုရှိတယ်ဆိုတာဟာ လတ်တလော စိတ်ဝင်စားမှုအကောင်း ဆုံးနဲ့ လေ့လာစမ်း သပ်မှုတွေပြု လုပ်နေကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုမှုဟာ တကမ္ဘာလုံး ( ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျွန်လအထိဆိုရင် 4.3 billion တောင်ရှိပါတယ် ) များပြားလာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ သေးငယ်တဲ့ လှိုင်းနှုန်း Microwave မှာ Electromagnetic radiation တွေကို အသုံးပြုပါတယ် ။ တခြား ၀ါယာ လက် စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ Data Communication networks တွေမှာလည်း ဒီလိုအလားတူ radiation တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ် ။
WHO လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက မိုဘိုင်းဖုန်း ကထွက်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို IARC scale ပေါ် မူတည်ပြီးတော့ Group 2B ( ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ) အဆင့်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ ဘာကိုဆိုလိုသ လဲဆိုတော့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိခြင်း Carcinogenicity ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခြင်း နဲ့များများ အသုံးပြုခြင်းတို့ဟာ ကင်ဆာ နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါကြောင့်အချို့သော နိုင်ငံတွေမှာ ဓါတ်ရောင်ခြည် အကြံပေးအဖွဲ့တွေက မြို့နေလူထုထဲမှာ ဒီအန္တရာယ်ကိုလျော့ချဖို့အတွက် precautionary approach လို့ခေါ်တဲ့ မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်သတိထားနည်းလမ်းကို စတင်ကျင့်သုံးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။
များစွာသော လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေကနေပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေကနေ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရှိသလဲဆိုတာ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီလိုလေ့လာစမ်း သပ်မှုတွေ ကို လည်း များစွာသော သိပ္ပံဆိုင်ရာ ကော်မတီတွေကနေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုအကုန်လုံး ကို ပြန် လည်လေ့ လာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ လတ်တလော accessment တစ်ခုကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks ( SCENIHR ) ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ရေဒီယို လှိုင်းတွေရဲ့ တချို့ကို လူတွေရဲ့ဦးခေါင်းကနေ စုပ်ယူပါတယ် ။ ရေဒီယိုဝေ့ဖ်တွေဟာ GSM ဟမ်းဆက်မှာဆိုရင် peak power -2watt ရှိပြီး US analogue phone တွေမှာတော့အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှတ်တဲ့ စွမ်းအင်ဟာ 3.6 watt တောင် ရှိပါတယ် ။ တခြား မိုဘိုင်းနည်းပညာတွေဖြစ်တဲ့ CDMA2000 နဲ့ D-AMPS တွေကတော့ ဒီထက်ပိုနည်းတဲ့ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုကြပြီး 1 watt အောက်မှာပဲရှိပါတယ် ။ အမြင့်ဆုံးဘယ်လောက်ထိ စွမ်းအင်ထုတ်သလဲဆိုတာကတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသုံးစွဲနေတဲ့ mobile phone standard အပေါ်မူတည်နေပါတယ် ။ USA မှာဆိုရင်တော့ FCC လို့ခေါ်တဲ့ Federal Communications Commission ကနေပြီး SAR သတ်မှတ်မှုကို 1.6 W/kg လို့ သတ် မှတ်ထားပြီး ဦးခေါင်းထဲက တစ်ရှူးတွေထဲမှာ ပျမ်းမျှ တစ်ရှူး ၁ ဂရမ်ကို လွှမ်းမိုး သက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ် ။
SAR ဆိုတာကတော့ Specific Absorption Rate ဖြစ်ပြီး လူခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို ဘယ်လောက် ထိ စုပ်ယူသလဲဆိုတာကို တိုင်းတာတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဥရောပရဲ့ FCC ကနေ သတ်မှတ်မှုကတော့2W/kg ဖြစ်ပြီး တစ်ရှူးတွေရဲ့ ၁၀ ဂရမ်ကို လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ် ။
အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု ( Thermal Effects)
မိုကခရိုဝေ့ဖ် ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေရဲ့ ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တဲ့အချက်ကတော့ dielectric heating ဖြစ်ပြီး Dielectirc material တွေဖြစ်တဲ့ သက်ရှိတစ်ရှူးတွေဟာ Electromagnetic field ထဲမှာဆိုရင် Polar molecules တွေ လည့်ပတ်နေခြင်းကြောင့် အပူပေးခြင်းခံနေရပါတယ် ။ ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် မှာဆိုရင် ဒီလို heating effect ကို ဦးခေါင်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ တွေ့နိုင်ပြီး အပူချိန် တက်လာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ ဦးနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ဟာ local blood flow များလာ တာကြောင့် မလိုလားအပ်ပဲ အပူချိန်မြင့်မားလာခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ။
Lund Univerisity မှ ဆွီဒင်လေ့လာသူများဖြစ်တဲ့ Salford, Brun, Persson , Edberhardt နဲ့ Malmgren ဆိုသူတို့က ကြွက်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ဒီ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေကိုလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အဲဒီအခါ Blood - brain barrier ( ဦးနှောက်နှင့် သွေး ကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသူ ) တွေကနေတဆင့် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ပြီး albumin လို့ခေါ်တဲ့ ပရိုတိန်းဓါတ်တွေ ထွက်ရှိနေခြင်း (Leakage) ကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါကို ထပ်မံသက်သေပြဖို့အတွက် Allan Frey, Oscar and Hawkins ,Albert နဲ့ Kerns ဆိုသူတို့က Blood Brain Barrier ကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းက မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ကင်ဆာရောဂါရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို သက်သေပြဖို့အတွက် Danish Study ဆိုပြီးစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ တခြား လေ့လာမှုတွေကတော့ 13 nation INTERPHONE Project လို့အမည်တွင်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဦးနှောက်ကျူမာတွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ် ။ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်မှု ကြာမြင့်လာချိန်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း အမျိုးအစားတွေပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် လူငယ်လူရွယ်တွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုနဲ့ ဦးနှောက်ကင်ဆာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ထပ်မံလေ့လာကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
2008 ခုနှစ် Meta-analysis က ဘာကိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင် အချို့သောအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် RF Radiation တွေဟာ genotoxic ( မျိုးဗီဇ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်း ) ကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ Meta-study မှာဆိုရင်လည်း ၁၀၁ ယောက်စမ်းသပ်ခဲ့ရာမှာ ၄၂ ယောက်က ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ၄၉ ယောက် မှာ Genotoxic effect ရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် RF- EMF ( Electormagnetic fields) တွေဟာ မျိူဗီဇ genetic material တွေကို နည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပြီး ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေတွေရှိနေပါပြီလို့ လေ့လာစမ်းသပ်သူတွေက ပြောခဲ့ကြပါတယ် ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာလည်း Jounal Bioelectomagnetics မှာ Henry Lai နဲ့ Narenda P.Singh တို့ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ U.S government standard အတိုင်း အန္တရာယ်ကင်းအဆင့်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ microwave radiation ကို ၂ နာရီကြာ ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါ DNA ပျက်ဆီးသွားတာကို တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ ဒီလိုအလားတူ DNA ကို ထိခိုက် မှုရှိကြောင်းကိုလည်း ဥရောပဖက်မှာလည်း သက်သေပြမှုတွေ စမ်းသပ်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သြစတေးလျ လေ့လာစမ်းသပ်မှုမှာတော့ လူရဲ့ သုတ်ကောင် Spermatozoa ကို radio-frequency 1.8 GHz နဲ့ Specific absorption rate SAR 0.4 to 27.5 W/kg အတွင်း စမ်းသပ်စေခဲ့ပါတယ် ။
အဖြေကတော့ သုတ်ကောင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု နှုန်း Motality နဲ့ ရှင်သန်မှုနှုန်း Vitality ကို လျော့ ကျစေတာတွေ့ခဲ့ရပြီး Oxidative stress ကိုများစေတာလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ ဖုန်းကို မျိုးအဂါင်္နဲ့ နီးတဲ့ ခါးစပ်တွေနဲ့ ဘောင်းဘီ အိပ်ကပ်တွေထဲမထည့်ထားဖို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ထွက်ပေါ် လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ 8-Oxo-2'-deoxyguanosiene markers တွေများလာပြီး ဒီအန်အေ ပိုင်းပြတ် မှုနှုန်း DNA fragmentation များလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါသတဲ့ ။ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေ တဲ့အန္တရယ်တွေ ကို မီးမောင်းထိုးပြယုံပါပဲ ။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ WHO International Agancy for Research on Cancer မှာ ကြေငြာထားတာကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကနေထွက်တဲ့ EMF ( Electromagnetic fields ) တွေနဲ့ တခြားအရာတွေက လူတွေကို ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ "possibly carcinogenic to humans" ရှိတယ် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ပြီးတော့ အကြံပေးချက်တချို့ကိုလည်းရေးသားထားပါသေးတယ်
- ဦးခေါင်းပိုင်းကို ဓါတ်ရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မသက်ရောက်အောင်လို့ Hands-free သုံးစွဲပါ ။
- ခန္ဓာကိုယ်ကနေ တတ်နိုင်သမျှ ဖုန်းကို ဝေးဝေးမှာထားပါ ။
- ပြင်ပ အင်တာနာ မပါပဲနဲ့ကားထဲမှာ တယ်လီဖုန်းအသုံးမပြုပါနဲ့ ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မိုဘုန်းဖုန်းကနေထွက်တဲ့ EMF နဲ့ Micro wave တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်း လင်းသိကြပြီလို့ထင်ပါတယ် ။ အားလုံးပဲ နီးစပ်ရာကို မျှဝေပေးကြပါ ။ တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်တဲ့ နည်း လမ်းတွေနဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ရှောင်ရှားကြပါစို့ ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_radiation_and_health
^ "Market Data Summary (Q2 2009)". GSM Association. Retrieved 2010-01-30.
^ab IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans. (PDF). World Health Organization press release N° 208 (International Agency for Research on Cancer). 2011-05-31. Retrieved 2011-06-02.
^ab "Information: Wie gefährlich sind Handystrahlen wirklich?" (in German). Marktgemeinde Pressbaum. Retrieved 2008-01-23.
^ "Conclusions on mobile phones and radio frequency fields". European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). Retrieved 2008-12-08.
9:07:00 am Website များစုစည်းရာ No comments
Website များစုစည်းရာ (၁) MP3 - free download sites များ မြန်မာသီချင်းsites
ဒီအောက်က ၀က်ဆိုဒ်တွေမှာ ဆောစ့်ဝဲတွေ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆိုင်ရာတွေ တော်တော်များများကို ဒေါင်းလုပ်ချနိူင်ပါတယ်....
ဒီလ တင်ပြချင်တာကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး Websites ၁၀
ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တွေ၊
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Courses တွေ မျိုးစုံရှိ ပါတယ်။ အချိန်၊ ငွေကြေး
တတ်နိုင်ရင် အလွယ်တကူ တက်ရောက် သင်ကြားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်း
ပေါ်က Learning English Websites တွေကတော့ အချိန် ကုန်ငွေကုန် သက်သာပြီး
နောက်ဆုံးပေါ် up-to-date English Language Knowledge တွေကို အလွယ်တကူ
လေ့လာလို့ရတာမို့ ယခုလိုတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Websites တွေရဲ့
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Ranking) ကို ယူကေနိုင်ငံအခြေစိုက် လွတ်လပ်တဲ့
အွန်လိုင်း လေ့လာသူများအသင်းက သတ်မှတ်ထားခြင်းပါ။
ကဲ ...ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေး Websites တွေဆီကို
အလည်သွားကြရ အောင် ...။
သူတွေအတွက် အထူး လွှင့်တင်ထားတဲ့ website ပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်
တို့လို english ဘာသာ mother language မဟုတ်တဲ့ လေ့လာသူများအတွက်
သင့်လျော်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးစုံထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်
နိုင်တဲ့ program တွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ - one
stop english perfection program မျိုးတွေနဲ့ပါ။
မျက်စိမှုန်သူများနှင့် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေ အတွက်ပါ လေ့လာနိုင်ဖုိ့
IT နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ website များ
၄။ မြန်မာမြားနတ်မောင် ကွန်မြူနတီဖိုရမ်
၇။ MYSTERY ZILLION Forum
၈။ Planet ဖိုရမ်
၁၀။ မြန်မာချတ် အွန်လိုင်း
၁၁။ မြန်မာ ဆိုက်ဘာ
ဖတ်စရာ မှတ်စရာ website များ
၇။ အိုးဝေ (စင်္ကာပူ)
၈။ ဖွဲ့တည်ရာ မီဒီယာ
၂၉။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်
၃၂။ People Magazine
ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော website များ
၆။ ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ
၇။ အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၁)
၁၆။ ကသစ်ဝိုင်းဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ
၁၈။ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ်
ဖျော်ဖြေရေး website များ
၃။ မြန်မာသီချင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းများ
၄။ မြန်မာ ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို (ဘားမစ် ကလတ်စစ်)
၁၀။ အာရှနိုင်ငံများမှ ဇာတ်လမ်းများ
၁၁။ အိမ်မက်လှိုင်း(မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ် သီချင်းများ)
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ကွန်ပျူတာပြဿနာအရပ်ရပ်ကို အဖြေရှာပေးနိုင်မည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများ၊ ထုတ်ကုန်များအပြင် အခြားဆားဗစ်အများအပြားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားပြီး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ program ရေးသားခြင်း၊ Maintenance ပြု လုပ်ခြင်းတို့အတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြား virus ပြဿနာများ၊ အင်တာနက်လုံခြုံရေးစနစ်များအတွက် information များကိုလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ အိမ်၊ အစားအသောက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးခန်း၊ အလှအပအစရှိသည့် အကြောင်းအရာမြောက်များစွာ၏နမူနာများကို လေ့လာနိုင်မည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအလိုက်နမူနာနှင့် အကြံပြုချက်များကို အခမဲ့ရယူနိုင်သလို ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအလိုက် သုံးသပ်ချက်နှင့်ပြုလုပ်ပုံများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်နှင့် လူမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် အကြံ ပြုချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာနိုင်တာကြောင့် နမူနာပုံစံများရယူအသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် အမှန်တကယ်အဆင်ပြေစေနိုင်မည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကျ ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်းကိုငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက် ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဆိုက်မှတဆင့် Theme များပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း Windows Theme မြောက်များစွာကို ဖော်ပြပေးထား ပြီး အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်းအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက် Search bar ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Game, Sport, Cartoon စသည်ဖြင့် Theme များကိုခေါင်းစဉ်များခွဲပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်အ တွင်း Top Download Theme များ၊ Windows7Theme များအပြင် အခြား 3D ပုံနှင့် Wallpaper အများအပြားကိုလည်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ အင်တာနက်မှတဆင့် လှပကောင်းမွန်သော Font အများအပြားကိုရယူအသုံးပြုနိုင်မည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း Font အများအပြားကို အခမဲ့ရယူနိုင်စေပြီး Font များအား အက္ခရာစဉ်အလိုက်ရှာဖွေနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း Top 10 Font များနှင့် Download အရေအတွက်အများဆုံး Font များကိုဖော်ပြပေးထားပြီး Font အသွင်အပြင်များမှာ အလွန်ဆန်းသစ်လှပတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Font များအား Windows နှင့် Mac တို့တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး Font အသစ်များ၊ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး Font များ၊ ဒီဇိုင်နာများဖန်တီးထားသော Font များ စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲကာ သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ဂီတနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် ရှေးခေတ်ဂန္ဓ၀င်ဂီတမှ ယနေ့ခေတ် Rock ဂီတအထိ အမျိုးအစားများခွဲခြားပြီး စုစည်းပေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း Indie Rock, Classic Rock, Hip-Hop, R&B, Country နှင့် Jazz/ Classical စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များခွဲခြားဖော်ပြထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အလိုက်အ ဆိုတော်အမည်များနှင့် သီချင်းအ မည်များကို ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း Visit အနေဖြင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သလို Member ၀င်တစ်ရောက်အနေ ဖြင့်လည်း ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါ တယ်။ သီချင်းအပုဒ်ပေါင်း ၆ သန်းကျော်ပါဝင်တာကြောင့် သီ ချင်းနှစ်သက်သူများအတွက် အ ဆင်ပြေစေနိုင်မည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ အွန်လိုင်းအဘိဓါန်အနေဖြင့် အသုံးပြုစေနိုင်မည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်းသိလိုသမျှအား Search Bar မှတဆင့်ရှာဖွေရယူနိုင်ပြီး အခြား Link များကိုပါ ပြန်လည်ဖော်ပြ ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Register ပြုလုပ်၍အသုံးပြုနိုင်သလို Visit အနေဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသတင်းများ၊ ပုံပြင်များ၊ ၀တ္ထုများ၊ မဂ္ဂဇင်းများကိုလည်း ၀င် ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Member ပြုလုပ်ပေးပါက မိမိဖော်ပြလိုသောအကြောင်းအရာများကို ရေးမှတ်တင်ထားနိုင်တာကြောင့် အင်တာနက်မှတဆင့် ဗဟုသုတရှာဖွေလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည့်ဆိုက်တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ဂိမ်းများဆော့ကစားလိုသူများအတွက် ယခုဆိုက်လေးဟာအတော် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း အလွယ်တကူ သွားလာရှာဖွေနိုင် စေရန် Find Box ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ဉာဏ်စမ်းဂိမ်း၊ အားကစားဂိမ်း၊ Word ဂိမ်းများအပြင် အခြားစိတ် ၀င်စားဖွယ်ဂိမ်းပေါင်းမြောက်များ စွာကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှတ ဆင့် တိုက်ရိုက်ဆော့ကစားနိုင်သ လို Download ပြုလုပ်ကာ ရယူဆော့ကစားရာမှာလည်း အခက်အခဲမရှိပဲရယူနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တစ်ပါတ်အတွင်းအကောင်းဆုံးနှင့် လူအများအနှစ် သက်ဆုံးဂိမ်းများကိုတော့ Home Page တွင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သဘာဝပုံအလှအပများကို ရယူအသုံးပြုလိုသူများအတွက် ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ အတော်လေးကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း ပန်းပုံအများအပြားကိုတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားပေးထား တာကြောင့် အသုံးပြုရယူရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ထို့ပြင် E-mail လိပ်စာ အတွင်းသို့ရယူလိုပါကလည်း မိမိ E-mail Account အားထည့်သွင်း ပြီး Send Request ပြုလုပ်နိုင်ပါ တယ်။ ဆိုက်အတွင်းပန်းပုံအမျိုး အစားများအား အရောင်များနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး မိမိနှစ် သက်ရာအရောင်နှင့် ပန်းအမျိုးအ စားကိုအလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အရောင် စုံပန်းများကိုရွေးချယ်ရယူလိုသူ များအတွက် အဆင်ပြေမည့်ဆိုက် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာများနှင့် အကြံဉာဏ်များကို ရယူလိုသူများအတွက် အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အထိသင်ကြားနိုင်စေရန် သင်ခန်းစာများအပြင်၊ စာအုပ်များ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ထို့ပြင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအောင်လက်မှတ်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ပုံနှင့် စီမံကိန်းချမှတ်မှုများကိုပါ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ခွဲခြားပေးထားပြီး အဆင့်ဆင့်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ဘာသာစကားပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံထားခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
မိမိအားလပ်ချိန်ခဏတာအတွင်း စိတ်လက်အပန်းပြေစေရန်အတွက် မဂ္ဂဇင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း နှင့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကိုဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက် အတွင်းပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး မဂ္ဂဇင်း ၁၀ စောင်အပြင် အခြားဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်များ၏ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများအပြင်၊ စတိတ်ရှိုးများကိုပါ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဆောင်းပါးများ၊ ဟာသများနှင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူများ၏ အကြံပြုချက်များကိုပါ တွေ့ရပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေစေနိုင်ရန် Search Bar ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Register ပြုလုပ်၍သော်လည်းကောင်း Visit အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Ringtone များ၊ Wallpaper များ ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အခြားဖုန်း player များအား အမခဲ့ရယူအသုးံပြုနိုင်စေမည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ် Ringtone အများအပြား နှင့် အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံး Wallpaper များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး အခြားဟာသများ၊ သီချင်းဖိုင်များ၊ Music Video များကိုပါ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း မိမိရှာဖွေလိုသောအကြောင်းအရာများအား အလွယ်တကူရှာဖွေပေးစေနိုင်မည့် Search Bar များပါဝင်ကာ အခြားဖုန်းစတိုးများ၊ Clip Art များအပြင် ဖုန်းအတွင်းအသုံးပြုသော Application များကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ် တွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Websites ကလေးတွေ တွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ မျှလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ဆိုဒ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တချို့ ဆိုဒ်တွေ ထဲမှာ မြန်မာလိုစာအုပ်တွေ Upload တင်ထားတာတွေ ရှိတော့ မြန်မာ စာအုပ်ပါ ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်.. သူ့အထဲမှာညွှန်းထားတာတော့ အကောင်းဆုံး Websites အခု ( ၁၈ ) လို့ပြောတာပဲ ...နဂို မူရင်းရေးထားတဲ့သူကတော့ အခု ၂၀ ပါ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အထဲက တချို့ ဆိုဒ်တွေကမရှိတော့လို့ ကျန်တာကလေးကိုပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. Free Ebook Download ပါ .. Free နော် Free .. :) :) ကျွန်တော်တို့ တွေက Free ဆိုမှ စိတ်ဝင်စား ကြလို့ ကြေငြာပေးတာပါ...အဲဒီ့ ၁၈ ခုကတော့ အောက်မှာနော်... လိုလို မယ်မယ် ပေါ့ .. ကူးပြီးတော့ Save ရင် Save ထားလိုက်ပါ...
ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ(အကျဉ်းချုပ်)
ခရစ်ယာန် ဘာသာ Data from Myanmar Online Encyclopedia & Murann မူလအစမှာ ဂျုးဘာသာမှစတင်ခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် မောရှေ၏ ပညတ်တရား(၁၀...
၁၈၄၅၊ အောက်တိုဘာမှာ လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဆီက ပြစ်တင်စာရတယ်။ မိဘမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကြောင့် Wilson လမ်းထဲကလူတွေမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့...
ကောင်းကင်ဘုံနှင့် နိဗာန်ဘုံ၏ ခြားနားချက်များ
ကောင်းကင်ဘုံနှင့် နိဗာန်ဘုံ၏ ခြားနားချက်များ (by Dr.Alvin A.low) ၁။ ။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် နိဗာန်ဘုံမတူကြပေ။ ၂။ ။ နိဗာန်ဘုံသည် တပ်...
ကျင့်ဆောင် လိုက်လျောက်၇န် - ပညတ်တော်မြတ် ၆၁၃ ပါး မေးလိုက်လျင် ..ခရစ်ယာန် အများစုဟာ ထာဝရဘုရား၏ အလိုတော်ကို လိုက်နာလိုသုများဖြစ်...
လက်မရှိပေမယ့် လေယဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတဲ့မိန်းကလေး အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ Post လေးမို့ တဆင့်ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် Oxford နဲ့ Cambridge ...
ခရစ်ယာန်တိုင်း သိရှိရန်လိုအပ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်း
ဣသရေလပြည်ကြီး (12 Tribes) သည် ရှောလမုန်မင်း ကြီးအပြီး ၂ ခြမ်းကွဲကွာခဲ့သည်။ တောင်အပိုင်း ယုဒ (2 Tribes) အဖြစ်၊ နှင့် မြောက်ပိုင်း ဣသရေ /Ephra...
ဗုဒ္ဓဂေါတမ ဗုဒ္ဓသည်လည်း တမလွန်ကမ္ဘာမှ ကြွဆင်းလာသော ဘုရားလောင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ဗုဒ္ဓ၏တရားလမ်းသည်မခိုင်လုံဟု ဆိုနိုင် ပါသလား? လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာ...
Copyright © မြန်မာဧ၀ံဂေလိအသင်းတော် (မလေးရှား) | Powered by Blogger